လိင်ပြောင်းလဲခြင်းနောင်တဗီဒီယိုများ | CAUSE
ဒေါက်တာ Quentin ဗန်မီတာအားဖြင့်လိင်သမိုင်း
Dianne Colbert ဗွီဒီယိုအားလုံခြုံသောကျောင်းများတွင်သင်ကြားခြင်း
ပါမောက္ခဂျွန်ဝှိုက်ဟယ်လ် (Child White Gender Dysphoria) အကြောင်းဗီဒီယို ၁၂ ခုတင်ထားသည်
ကျား, မ Dysphoria အပေါ်ပါမောက္ခဂျွန် Whithall ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆောင်းပါးများ
Walt Heyer - လိင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်နောင်တ
ကို Safe ကျောင်းများတွင် CAUSE ဗီဒီယို
ခွင & မူပိုင်
နိုဝင်ဘာလ 6, 2018
ငါသည်ငါ့လိင်သို့ပြန်သွားရန် Want: လိင် (RT ကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်) ပြောင်းလဲနေတဲ့နောင်တသောသူသည်လိင်ကလူ
ဟောင်းများလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့် LGBT များ၏သားသမီးများအမှန်တရားမပြောတတ်!
Transgender Path မှလူငယ်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏သတင်းစကား
ငါ 20 နှစ်ပေါင်းလိင် '' အမျိုးသမီး 'အဖြစ်နေထိုင်ပြီးနောက်, ငါလိင်သိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်။ အမှန်တရားမှီဝဲနှင့်ပြောင်းလဲ
Walter Heyer - သူ Trans-ဤတွင်သူကလူတိုင်းသိစခေငျြဘာလဲ Be ရန်အသုံးပြု
အခုတော့ဘုရားသခင့်အမှုဆောင်ထွ-Transgene! | Nichols Collins | အဓိကလမ်း
Walter Heyer Pt 1 - ဝေါ့ မှစ. လော်ရာမှဝေါ့မှ - တစ်ဖက်လိင်ရဲ့ပုံပြင်
Walter Heyer Pt2- ဝေါ့ မှစ. လော်ရာမှဝေါ့မှ - တစ်ဖက်လိင်ရဲ့ပုံပြင်
ဂျက်ဖရီရဲ့ပုံပြင်: နောင်တနှင့်အတူထွ-Transgender များ
သူတို့ရဲ့အကူးအပြောင်းနာကျင်မှု fix မပြုခဲ့အဖြစ်အခြားကျားအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်သူမြားစှာတစ်ဦးချင်းစီနောက်ဆုံးမှာ, သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောင်တ။
မူပိုင် 2018 ။ CAUSE (ညွန့်ပေါင်းမလုံခြုံလိင်ပညာပေးဆန့်ကျင်) မှတ်ပုံတင် Advocacy Group မှ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး